Political Page ပုလဲသွယ်: "ရိုဟင်ဂျာ"
"ရိုဟင်ဂျာ" နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်စားကြသည်။
Dear Dr. Swe,
It’s Dario from AsiaNews. Long time I don’t have news from you, how are you? Hope not to disturb you but I’d like to ask your opinion aboutatopic so much discussed in these days, mostly after UN General Assembly passedaresolution “urging Myanmar to give the stateless Rohingya minority equal access to citizenship and to crack down on Buddhist violence against them and other Muslims in the southeast Asian nation”.
So, what do you think about this resolution? Do Rohingya minority deserve citizenship because they actually ARE people of Myanmar? Is it possibleapolitical solution of the problem?
What can religious and political leaders (i.e. Aung San Suu Kyi) do to ease tensions between Buddhist and Muslims?
As usual, thanksalot for your opinion. Every time so much important to understandalittle bit better the context and write accurate report!
"ရိုဟင်ဂျာ" မြန်မာပြည်မှာလဲ ပြောဆိုကြသည်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း (NLD) နှင့် (BBC) အင်တာဗျူး
• ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ မပါဘူး။
• ရိုဟင်ဂျာ ကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့် တောင်းဆိုတာဟာ မှားယွင်းတဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်။
• မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်တယ်။
• ဒီလိုမခေါ်ရဘူး။ ဒီလိုခေါ်ပါဆိုတာ ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။
• နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆိုတာ ဥပဒေအရဖြစ်ရမယ်။
• ကိုယ်ပိုင်သဘေားထားသာဖြစ်။ NLD ရဲ့ တရားဝင်သဘောထားမဟုတ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 6:18 PM